Archive du 20181013
4 taona katroka no niverenan’i Dada Miandrandra azy ny Malagasy
Efatra taona katroka rahampitso alahady 14 oktobra no nisehoan’i Marc Ravalomanana vahoaka voalohany taorian’ny fiverenany an-tanindrazana rehefa voatery nanao sesitany ny tenany tany Afrika Atsimo taorian’ny fanonganam-panjankana ny taona 2009.
Hetsiky ny zanak’i Dada Hangorom-potsy Antananarivo anio
Rakotra ny mpanohana an’i Marc Ravalomanana kandida laharana faha-25 ny tanàna omaly, toy ny tena Analakely sy manodidina. Horakora-pifaliana ny an’ny tanora sy ireo efa zokinjokiny tamin’ny hetsika maro samihafa nentina nanehoana sy nanentanana ny vahoaka teny rehetra teny,
Kandidà 22 Mila mibaiko ny CENI ny HCC
Tonga nametraka ny taratasy fitakiana hanitsiana ny lisi-pifidianana teny amin`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana ireo mpikambana sasany ao anatin`ny firiasankina ny kandidà omaly tao aorian`ny fanambarana nataon`izy ireo.
Imbiky Herilaza ‘Mety holavin`ny HCC ny fangatahan`ireo kandidà 22”
“Tsy azo ho raisina ny fitoriana na fangatahana nataon`ireo kandidà 22 teny amin`ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ary mety ho lavin`ny HCC izany satria ny lalàna efa mazava fa tapitra tamin`ny 15 mey ny fanokafana sy fanitsiana ny lisim-pifidianana” hoy Imbiky Herilaza, mpitsara.
Tetikasa FANOA Hanetsika ny tanora hifidy
Tanora miisa 2000 manerana ny faritra 22 no handray anjara amin’ny Fihaonambe nasionaly sy ny Diabe ho fandraisana andraikitra amin’ny fifidianana izay hotanterahana ny 16 sy 17 oktobra 2018 ho avy izao.
Maro dia maro ny fangatahana sy fitoriana mipetraka eo anivon`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana.
Governemanta Ntsay Hisy minisitra maromaro hametra-pialana ?
Araka ny loharanom-baovao voaray dia mikorontana tanteraka ny governemanta tarihan`ny praiminisitra Ntsay Christian. Miady ary sakay sy maso tanteraka ireo mpikambana ao amin`izao fotoana izao.
Transparency International Initiative Madagascar Mitaky ny fangaraharan’ny volan’ireo kandida
Nanambara ny fahadisoam-panantenany ny amin’ny tsy fahalavorarian’ny lalàm-pifidianana mahakasika ny fangaraharan’ny vola ampiasain’ny kandida ny Transparency International Initiative Madagascar (TI-IM) tetsy amin’ny foibeny Ambaranjana omaly zoma 12 oktobra.
Filohan’ny CENI “Atero ny porofona hosoka hanapahan-kevitra”
Nisy ny atrikasa notanterahan’ny vaomiera nasionaly mahaleotena momba ny fifidianana (CENI) sy ny tetikasan’ny firenena mikambana ho amin’ny fampandrosoana (PNUD) ary ireo solontenan’ny haino aman-jery sy ny gazety tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina omaly zoma 12 oktobra.
Fanohanana an’i Marc Ravalomanana Fitiavana sy finiavana hafa mihitsy
Sesilany ny fanohanana an’i Marc Ravalomanana amin’ny endriny samihafa amin’izao fotoana.
Fifanintsanana CAN 2019 Vonona handavo ny Nzalang Nacional ny Barea anio
Vonona tanteraka ireo mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara “au complet” hiatrika sy handavo ny ekipam-pirenena Gineana « Nzalang Nacional » ao
Basket Play Off Alley Hoop 15 taonan’ny RDJ Natolotry ny tale jeneraly ny lokan’ireo nandresy
Hangotraka ny lalao Play Off amin’ny fifaninanana basket Alley Hoop karakarain’ny onjapeo RDJ 96.6 Fm nentina nanamarihana ny faha-15 taonany. Ireo ekipa 1 sy faha-2
Tao anatin’ny lanonana tsotra dia tsotra notontosaina teny amin’ny kianjan’i Betongolo taminny 10 oktobra lasa teo no nanoloran’ny fikambanana Za’Gasy Godasy sy televiziona ecran plat maromaro ho an'ny kliobana rugby SCB “Sporting Club de Besarety”.
Tobim-piantsonana Andohatapenaka Nangataka fihaonana ilay olon-tsotra namefy ny tany
Niteraka resabe teto an-drenivohitra nanomboka ny alakamisy hariva teo ny fisian’ireo olon-tsotra namefy ny ampahan-tany mbola an’ny tobim-piantsonana etsy Andohatapenaka.
Fisorohana ny Pesta Nanadio tokontany hatramin’ny minisitra
Hiditra anaty fahavaratra isika ankehitriny, hoy ny minisitry ny fampianarana tekinika sy ny fampiofanana ara-kasa, Lydia Aimée Rahantasoa, raha nanazava ny antony nanatontosan’izy ireo fanadiovana faobe ny tokontaniben’ity minisitera ity tetsy Ampefiloha omaly.
VONO OLONA TENY TANJOMBATO
Telo lahy izay mpiasan’ny orinasa afaka haba no tompon’antoka tamin’ny famonoana ho faty mpifankatia tetsy Tanjombato.
Fikirakirana ny vatosoa Betsaka ny mpandraharaha no tsy manara-dalàna
Zava-dehibe eto amin’ny firenena ny foara be momba ny vatosoa sy ny firavaka ( Madagascar Gem and Jewellery fair -1ère edition ) izay hotanterahina eny amin’ny Munning Business Center Ivato ny 23 hatramin’ny 27 oktobra ho avy izao.